သက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလယ်တန်းပညာရေး Aso TSO အချိန်ပညာရေး BSO ကျယ်ပြန့်ပထမဦးဆုံးဒီဂရီ OKAN Antwerp
De Singel အတွက် spectrum အားကစားသမားများ
စာသင်ခန်းထဲမှာ Facebook က!
sign up ကို
ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2018 Bert
GO အဖြစ်ကျနော်တို့! spectrum ကျောင်းပု Antwerp က Secondary ပညာရေးဗဟိုမှတ်ပုံတင်စနစ်အားဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သင်ပထမဦးဆုံးကြောငျးအတှကျသင့်ကလေးကိုကျောင်းအပ်မလား? ထိုအခါသင် 8 ဖေဖော်ဝါရီလမှ 27 သင့်ပါတယ်ဒီဂျစ်တယ်မှတဆင့်လျှောက်ထား http://meldjeaan.antwerpen.be
Uncategorized မှတ်ချက် Leave
ဖွင့်ရက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Campus လည်!
ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2018 ဖေဖော်ဝါရီလ 5, 2018 Bert
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်စစ်ဆေး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ !
ပိုမိုသိရှိလိုပါကအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ရယူနိုင်ပါသည် directeur@spectrumschool.be သို့မဟုတ် 03 / 328 05 00 ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်။
ဇူလိုင်လ 24, 2017 ရောင်စဉ်ကျောင်း
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားဖြင့် Spectrumschool.be ဘာသာပြန်ချက်ဖတ်ရှုဖို့ကွန်ပျူတာကိုသုံးပါ။
ရိုးမားအတွက် Merdan Taplak
မတ်လ 28, 2017 ရောင်စဉ်ကျောင်း
Merdan Taplakကြာသပတေးနေ့ကသူ့တီးဝိုင်း Merdan Taplak Orkestar အတွက်အတူတစ်ကျော့ပြန်စေသည်အဆိုပါရိုးမား။ ဒါပေမဲ့ DJ သမား / ဂီတပညာရှင်အတူငါတို့ဌာန OKAN ဆရာမဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ဒဏ်ငွေဆောင်းပါး သူက Antwerp ၌မိမိအကြိုက်ဆုံးအစက်အပြောက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောသွားနှင့်, Spectrum ကျောင်းသိသာပျောက်ဆုံးနေတဲ့မခံခဲ့ရ!
ကြေညာချက်များ မှတ်ချက် Leave
Loïcကျွန်တော်တို့ရဲ့ OKAN ဌာနသို့သွားရောက်ကြည့်ရှု!
ဖေဖော်ဝါရီလ 3, 2017 ရောင်စဉ်ကျောင်း
Loïcကျွန်တော်တို့ရဲ့ OKAN ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူသွားလေ၏အင်တာနက်ကဖြစ်ရပ်ဆန်း) အကြီး "gerechjes '' လုပ်လာတယ်။
အဆိုပါဗီဒီယိုအားကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။
သိတငျးက Wall - Haik
ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2016 ရောင်စဉ်ကျောင်း
Haik ဂျပန်အကြောင်းကိုအရူးဖြစ်ပါသည်, သင်တို့သည်ငါတို့၏သစ်ကိုအမှတ်တရ Fame ၏ရုပ်ရှင်များတွင်ရှင်းလင်းစွာသိမြင်နိုင်သည်!
အောက်တိုဘာလ 7, 2016 အောက်တိုဘာလ 13, 2016 ရောင်စဉ်ကျောင်း
အဆိုပါ Insight Piste (ကျောင်းဝင်း Ruggeveld ပေါ်မှာငါတို့အိမ်နီးချင်းများ) ၏အမြိုးသားအယနေ့ပထမဦးဆုံးတန်းအတွက်ယောက်ျားလေးများနှင့်အတူသစ်သားလှေအောင်သွားရောက်ကြည့်ရှုမြို့သို့ရောက်လေ၏။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြောင်းပြောဆို!
အောက်တိုဘာလ 7, 2016 ရောင်စဉ်ကျောင်း
မေလ 30, 2016 ရောင်စဉ်ကျောင်း
Lilibeth ရှငျဘုရငျသဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကျောင်းသားများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဟောင်းတဦးကျောင်းသားမိုဟာမက်စနစ်အပေါ်တော်ဝင်နန်းတော်မှာသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ဝေမျှဖို့ဖိတ်ခေါ်ခံရတယ် သင်ယူခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင် အတူတူ။ သူတို့ကအကြီးအကြည့်ပြီးသားဤမျှလောက်ကြီးစွာသောအမှုကိုပြုလေပြီတကား အတူတကွတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းမှကျောင်းသားတွေနဲ့အတူ, သော့ချက်ဝန်ကြီးများနှင့်ရှင်ဘုရင်ဘရပ်ဆဲလ်၌စည်းဝေးသောနေ့ရက်ကာလကိုလွန်စေ!
ကျောင်းပရဝုဏ် Ruggeveld: 03 / 328 05 00
ကျောင်းဝင်းလန်: 03 / 217 43 40
.... အဆိုပါမာစတာကိုဆက်သွယ်ပါ | မူပိုင်ခွင့်© 2016 Spectrum ကျောင်း ....